Haddii ay suurtogal tahay iska ilaali inaad xiriir jidhka/taabasho jir ahaaneed la yeelato dadka kale ee aan ahayn kuwa aad la nooshahay. Waxa ay taas micnaheedu tahay waxa ka mid ah in lagaala talinaayo inaad qabanqaabisid ama ka qeybqaadatid xaflad ama kulamada kale ee bulshada. Waa in sidoo kale laga fogaado waxqabadyada qaar aan la sameyn karin iyadoo aan masaadafa dadka kale laga fogaanaynin, sida xiriirka isboortiga ama daryeelka caafimaadka ama sidoo kale daryeelka caafimaadka iyo is qurxinta oo aan caafimaadka xiriir la laheyn.
Go'aanka waxa sidoo kale ku jira talo bixinta guud ee laga sii adkeeyay ee la xiriirata goobaha shaqada iyo waxqabadyada – sida tusaale ahaan dukaamada, xarumaha ganacsiga iyo goobaha isboortiga. Waxqabadyada iyo loo shaqeeyeyaasha waxa inay qaadaan talaabooyin si uu qof kastaa ugu raaci karo talooyinka guud ee kor ku xusan:
Talaabooyinka loo shaqeeyayaashu waxay noqon karaan ku dhiirrigelinta shaqaalaha inay guriga ka soo shaqeeyaan, iyadoo ls siiya fursado dheeri ah oo ay guriga kaga soo shaqeynayaan, iyo in dib loo dhigo safarada shaqadu dadka dirto, shirarka iyo kulammada kale ee jir aheed/tooska ah. Waxqabadyada kale waxay dhimi karaan tirada soo booqdayaasha ah ee isla waqti joogta, lagu beego saacadaha furitaanka, oo la soo bandhigo fursadaha waxqabadka dhijitaalka ah.
Uppdaterades 25 nov 2020 15:16